Kidnapping sy vonoan’olona : Aiza ny SMM? -
AccueilRaharaham-pirenenaKidnapping sy vonoan’olona : Aiza ny SMM?
Tsy niatrika ny fotoam-pitsarana momba ilay kidnapping namoizana ain’olona tany Toamasina, ny volana Novambra 2014 mihitsy ilay mpitsara voampanga ho anisan’ny atidoha nikotrika izany hatramin’ny omaly. Ny alatsinainy lasa teo no nandeha tetsy amin’ny efitrano faha-4 Anosy ny raharaham-pitsarana momba ilay fakana an-keriny an’i Arnaud sy Annie (maty novonoina tamin’ny fomba feno habibiana), ary mbola hitohy anio izany. Tsy nitranga mihitsy anefa ilay mpitsara.
Milaza ny hanatanteraka grevy faobe tsy misy mpiandry raharaha anefa ny SMM manomboka anio. Fifandrifian-javatra fotsiny ihany ve izao fitokonana izao, sy ny fotoam-pitsarana ilay fakana an-keriny namoizana olona maha voarohirohy mpitsara? Aiza ny SMM manoloana izao raharaha izao, nahoana ny SMM no tsy manao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety mitaky ny tokony hanolorana ilay mpitsara eo anatrehan’ny Fitsarana? Tsy fakana an-keriny fotsiny mantsy ity resaka ity, fa heloka be vava noho ny vonoan’olona tamin’ny fomba feno habibiana.
Mitodika any amin’ny SMM ny mason’ny mpanara-baovao, noho ny fisian’ny mizàna tsindriana ila eo amin’ny fomba fiasan’ny SMM. Raha tsiahivina ny zava-nitranga teto volana maro lasa izay, dia ny SMM mihitsy no nanenjika sy nanao fanambarana tetsy sy teroa hatramin’ny fanakorontanana marary teny amin’ny HJRA, manodidina ny raharaha Claudine Razaimamonjy. Izao anefa misy mpitsara voasaringotra amina ady heloka be vava, fakàna an-keriny niharo vonoan’olona, tsy tonga miatrika Fitsarana, toa tsy andrenesam-peo ny SMM, ary mbola fanontaniana mipetraka aza hoe “nahoana no nahazo fahafahana vonjy maika izany mpitsara izany?”. Izao ve ilay fahaleovantena takian’ny filohan’ny SMM?
Marihina moa fa basy kalachnikov miisa efatra, ary bala an-jatony maro no sarona tao amin’ilay trano nahitana an’i Arnaud tao Andranomadio Toamasina, olona manodidina ny 75 no voarohirohy amin’ity raharaha ity, ka ny 40 tamin’izy ireo nahazo fahafahana vonjy maika avokoa. Isan’ny niatrika ny fotoam-pitsarana moa ilay vehivavy malaza amin’ity resaka kidnapping ity, antsoina hoe Stéphanie Roger Lala.